BBC News Somali waxay goobaysaa jiilka cusub ee dumarka gabya - BBC News Somali
BBC News Somali waxay goobaysaa jiilka cusub ee dumarka gabya
Waxaa furmay qabashada araajida tartanka gabayada laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da. Waa sanadkii labaad oo xiriir ah oo la qabto tartankan oo lagu magacaabo Tartanka Gabayga ee Dumarka Da'da Yar ee BBC News Somali 2018, wuxuuna u furanyahay haweenka da'dooda u dhaxayso 16 illaa 35 jir, iyada oo laga doonayo hal abuur gabay ay iyagu asal ahaan u leeyihiin oo ku qoran Afka Soomaaliga.
Tartankan abaalmarinta lagu bixiyo ayaa waxa uu biloowday sanadkii hore , isaga oo qeyb ka ahaa dabaaldegii 60 sano guuradii kasoo wareegtay markii la aasaasay BBC Somali. Guddi Garsoorayaal ah ayaa dooraya qofka guuleysta iyo labada ku xigaba, waxay eegi doonaan tayada luuqadda iyo inuu waafaqsan yahay shuruudaha gabayada iyada oo la eegi doono miisaanka, ereyada iyo qaafiyadda.
Gabayga loo soo gudbinayo guddiga tartanka waa in uusan ka badnayn 15 sadar, iyo hal daqiiqo oo cod ah. Taariikhda kama dambeysta ah ee lasoo gudbin karo waa 23:59 GMT (2:59am waqtiga geeska Afrika) maalinka Jimcaha 15-ka Juunyo, 2018.
Waxaa gabayada lagu soo gudbin karaa e-mail-ka ah tartanka.gabayga@bbc.co.uk ama khaanadda ka furan bogga BBC Somali ee https://bbc.lvis.io/bbcsyfp/. Sidoo kale faahfaahinta shuruudaha looga qeybgali karo tartanka waxaa laga heli karaa isla bogga bbcsomali.com.
Madaxa laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da, Cabdullaahi Cabdi Sheekh ayaa yiri "Waxaan ku faraxsanahay in aan halkii kasii wadno abaalmarinta, taas oo markii koobaad la bilaabay sannadkii hore, iyadoo ay caddaatay in aad loo daneynayay, oo illaa 100 qof ay soo dirsadeen arjiyada ka qeybgalka tartanka, ujeedkuna ahaa in dhagaystayaasheena loogu soo bandhigo codad cusub iyo gabayo tayo leh. Hal abuurka dumarka Soomaaliyeed - haddii ay ahaan lahayd ciyaaro dhaqameedyada ama isticmaalka luuqada- ayaa ah arrin aad iyo aad loo bogaadiyo. Abaalmarinta BBC-da waxa ay soo bandhigeysaa dhaqanka gabayada ee dumarka ku hadla Afka Soomaaliga meel kasta oo ay joogaan, inaga oo siinayna fursad ay kusoo gudibiyaan kartidooda iyo hibooyinkooda"
Rachael Akidi Okwir, oo ah madaxa Afafka kala duwan ee BBC Bariga Afrika ayaa tiri iyaduna "dhawaan umbay ahayd markii ay BBC-du samaysay toddobaadka dumarka, taas oo aan ku soo bandhignay dumarka Soomaaliyeed ee guulaha waaweyn ka soo hoyay ganacsiga. Abaalmarintanna waxay nagu caawin doontaa inaan aqoonsanno codad cusub oo gabdhaha gabya ah. BBC-da waxaa ka go'an in codkeeda uu gaaro dumarka, tallaabadan waxay muujineysaa in BBC News Somali ay hormuud ka tahay hiigsigaasi" "
Qofka ku guuleysta tartanka iyo labada qof ee kaalmaha xiga soo gala waxaa lagu dhawaaqi doonaa maalinta Arbacada ah ee ay tariikhu ku beegan tahay 18-ka bisha Luulyo 2018, xaflad lagu qaban doono magaalada Garoowe ee dalka Soomaaliya.
Abaalmarintan waxaa sannadii hore ku guuleysatay Deeqa Nuux Yoonis, oo ah ardayad ku sugan magaalada Hargeysa.
BBC News Somali waxay toddobaad kasta gaartaa illaa 4 milyan oo ruux sida lagu caddeeyay tirakoob la sameeyay sanadkii 2017-kii, dadkaas oo naga kala dhagaysta Bariga Afrika, Geeska Afrika, iyo dalacada adduunkaba, iyaga oo nagala socda Raadiyaha (oo ah kan loogu dhageysi badan yahay Soomaaliya), bogga Internetka iyo TV-ga iyo waliba baraha bulshada sida Twitter, Facebook iyo Instagram
BBC News Somali waxay qeyb ka tahay waaxda dunida la hadasha ee BBC ee BBC.
Wixii faafaahin dheeri ah, fadlan kala xiriir - amelia.fernandez-grandon@bbc.co.uk
Fiira gaar ah:
BBC-da waxaa toddobaadkii dunida oo dhan kaga taxan dad gaaraya 346 milyan, kuwaas oo naga la socda Raadiyaha Qeybta Dibadda la hadasha ee BBC, Telefishinka BBC World iyo bbc.com/news. Qeybta dunida la hadasha ee BBC waxaa laga heli karaa warar laga tebiyo raadiyaha, TV-ga iyo baraha internetka. BBC-da waxay dunida kula hadashaa 43 luqadood.
Sidee Shabaab ugu suurogashay burburinta garoonkii cusbaa ee Buula-Burde?
Taliban oo wasaaraddii haweenka u baddalay wasaarad kale
Feeryahanka doonaya in madaxweyne uu ka noqdo dalkiisa